”Yaa dhintay?!” – Hoggaamiyaha WK oo 20 maalmood kaddib soo muuqday + Sawirro (Muran weli ka taagan) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Yaa dhintay?!” – Hoggaamiyaha WK oo 20 maalmood kaddib soo muuqday +...
”Yaa dhintay?!” – Hoggaamiyaha WK oo 20 maalmood kaddib soo muuqday + Sawirro (Muran weli ka taagan)
(Sunchon) 02 Maajo 2020 – Hoggaamiyaha North Korea Kim Jong-Un ayaa jamaahiirta soo hor istaagey kaddib 20 maalmood oo wacaal la’aan ahayd – isagoo u muuqda nin doonaya inuu meesha ka saaro ku tiri kuteenta.
Ninkan ayaa xarigga ka jaray wershad farsamaysa kiikimada wax lagu bacrimiyo oo laga dhisay Sunchon, sida ay sheegtay saxaafadda dowladda oo soo bandhigtay sawirro cusub.
Kim ayaa la arkayaa isagoo dhoolla caddeeynaya oo kaaliyeyaashiisa la kaftamaya isla markaana wershada ku gaaf wareegaya, balse waxaa weli loo baahan yahay in la hubiyo aslinnimada sawirradan, sida ay qabto saxaafadda Galbeedku.
Waxaa Kim la socdey saraakiil sare oo North Korean oo ay ka mid tahay walaashii ka yar Kim Yo Jong, sida ay sheegtay wakaaladda Korean Central News Agency.
‘Dooni maayo inaan hadda ka hadlo. Wax baanse ka oran doonaa xilliga ku habboon.’ ayuu yiri MW Donald Trump oo wax laga waydiiyey xogta kasoo baxday wakaaladda KCNA.
Previous articleDHEGEYSO: ”Ma fahmi karo xitaa awaamiirta sahlan!” – Jahawareer lasoo dersey dad kasoo kabtay Covid-19 (Cabsi hor leh)
Next articleKAROONAHA KADDIB: Saxaafadda Galbeedka oo qireeysa inuu Turkigu hal arrin uga adkaan doono iyaga (Sabab?)